Nezvedu - Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd.
Kugadzira hupfumi hwevatengi, kugadzira chikuva chevashandi, kugadzira kukosha kwebhizinesi, kugadzira budiriro yenzanga.
Iyo yepasi rose mhando, mazana emakore Anan
Kuumba mufaro wakajairika waAnn kumba, kuitira kuti mhuri yega yega ishande mazuva ese nekunyemwerera uye nehupenyu
Isu tinotarisa pakuwana mumatanho emagetsi emagetsi muindasitiri yekuvhenekesa, uye akagadzirisa akati wandei zvirongwa zvemwenje nekutengesa kugadzirisa matambudziko emutengi zvinobudirira, uye kuhwina kurumbidzwa kwevatengi vazhinji. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi mashanu nematunhu, seEurope, Maodzanyemba neNorth America, Southeast Asia, South Africa, Middle East, nezvimwewo Uye ndeimwe yemakambani makuru ekuvhenekesa zvigadzirwa kunze kwenyika.
Isu mweya we "mutengi kutanga" sechinangwa chebhizimusi, Kugara uchiteedzera matekinoroji matsva, maitiro matsva, kugadzirwa kunoenderana-nehurongwa, uye kuburikidza ne ISO9001 manejimendi sisitimu sisitimu. Kwemakore, zvigadzirwa zviri Spot zvakatariswa uye Zvakasarudzika yenyika, matunhu Hunhu uye technical Tarisiro, zvinoenderana nenyika zviyero. Nepo zvigadzirwa zvichipfuudzwawo CQC, CE, ROHS, PSE, TUV uye nezvimwe zvemhando yepamusoro chitupa, uye zvakawana gumi nemashanu patent.
Nezve AnAn Lighting
Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd. yakavambwa muna 1999, yaimbozivikanwa seyakavandudzwa East Tube Fekitori, ikambani yakatwasuka fluorescent chubhu iyo inoisa kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa seimwe. Kambani yedu inofukidza 23 mu uye mashopu ari kusvika ku10000 mativi emamita. Chii zvakare, nekuda kwebhodhi reJiangxi, Anhui, Fujian neZhejiang, traffic iri nyore kuitira kuti ingoda maawa matanhatu chete kuNingbo chiteshi uye anenge maawa manomwe kuenda kumachiteshi eShanghai.
Pasi pehutungamiriri hweMukuru wedu Mukuru, Mr. Xu haibo, isu tinoumba uye tinonamatira kune "vanhu-vanotungamira" manejimendi manejimendi, kurima yakatanhamara tsika yemakambani, uye vese vari mumhuri vanoverenga Ti Tzu Kui mangwanani ega ega kuitira kunyatsogadzira inoenderana, yakatendeseka, inokwikwidzana mabhizimusi epamusoro.
TINOPA 24 MAAWA MABASA EBHAIBHERI
Iwo makuru zvigadzirwa ane fluorescent chubhu, pamusoro-kureba chubhu, ruvara inoenderana chubhu, chirimwa uye mhuka kukura tube, chipembenene chinouraya chubhu, BLB chubhu, Kuputika-chiratidzo chubhu, Natural uye yemukati ruvara chubhu uye Led chubhu. Iwo mafomu makuru ari kusanganisira nzvimbo yemwenje ye fluorescent, Parking lot, shopu yezvitoro, indasitiri yemachira, kurimwa kwezvirimwa nemhuka, maresitorendi, indasitiri yezvokurapa, bhangi, gasi chiteshi, yangu yemarasha, uye matanho uye imwe nzvimbo yekuvaraidza.